Jockstraps - dukaanka eGay
Jockstrap waa shay muhiim ah oo dhar ah qof kasta oo ku jira dharka isgaadhsiinta. Iyadoo markii hore loo abuuray ciyaaraha isboortiga ee Ciyaaraha 1930 asal ahaan oo loo yaqaan 'Jockstraps Jockstraps', Jockstraps ayaa si ballaaran loo ansixiyey bulshada Gay iyo kuwa ragga sababtoo ah sida jacayl ay dhab ahaantii yihiin.
eGay's Jockstrap's siinayaa raaxo weyn, soo qaado noocyo badan, noocyada, midabada iyo qaababka iyadoo ku xiran sababta aad u isticmaasho Jockstrap. Jockstraps waxaan ku iibinaa eGay.shop gacanta waa la sameeyaa, istiraatiijiyana waxaan siinayaa aqoonsi doorbidista jinsigaaga aad doorbideyso.
Badanaa ragga jockstraps ku raaxaysta halkii ay ku ciyaari lahaayeen cayaaraha waa lammaanaha iska leh ee qolka hurdada. Naqshadeynta Jock-ka ee aynu ku iibinno eGay waxay ku jimicsantahay jirkaaga dhammaan meelaha saxda ah, waxaana la-sameyaa oo hubiya tayada ugu wanaagsan ee la sameeyay si loo sii wado imtixaanka waqtiga.
Jokarrada ayaa sidoo kale loo aqoonsan yahay inay tahay nooc ka badbaado leh dharka u eg sida ay u oggolaanayso kubadaha ragga si ay hoos ugu dhigaan meel hoose laakiin meel ka baxsan, taas oo ka hortagaysa inay jajabaan.
Iibsashada a Duufaan laga bilaabo eGay.shop ayaa sidoo kale ka caawineysa bulshadaada caalimaga ah ee khaniisiinta sida 5% dhammaan dakhliga waxaa lagu deeqay hay'adaha samafalka ee dunida oo dhan. Iibsigaagu wuxuu ka qaybqaataa sinaanta dadka tirada yar
Inaad naftaada ka iibsato jockstrap laga bilaabo eGay.shop maanta oo aad xirtaan!